Grand Blue ma mudan tahay in la daawado? - Muuqaalka Crad
Grand Blue miyay mudan tahay in la daawado?
Leave a Comment on Grand Blue ma mudan tahay in la daawado?
Dulmar - Grand Blue ma mudan tahay in la daawado?
Grand Blue Episode 1, Xiliga 1
Grand Blue ma mudan in la daawado? Hagaag waxaan markii ugu horreysay daawaday Grand Blue markii ay soo baxday, horraantii 2018 dabayaaqadii 2017. Markii hore ma aanan fileyn wax gaar ah, kaliya taxanahaaga anime ee celceliska ah wuxuu udub dhexaad u ahaa hal mowduuc gaar ah. Markan waxa dhacday in la quusto, taas oo xiisihii iigu sarraysay markii hore gaadhay. Waxaan go'aansaday in aan u ogolaado sababtan, go'aan dhab ahaantii kama qoomameynayo. Laga soo bilaabo habka kaftanka loo dejiyay ilaa wejiyada nacasnimada ah ee isku dhafan jilayaashu waxay u jiidaan qorshayaasha waalan iyo kuwa qosolka leh ee ay naftooda ku galaan, Grand Blue wax walbaa aniga ayaa ii ahaa oo si buuxda ayaan ugu riyaaqay dhacdo kasta.
Haddii aad horay u daawatay Grand Blue oo aad la yaabban tahay haddii uu jiri doono xilli 2 waxaad akhrin kartaa maqaalkeena ku saabsan xilli 2 halkan. Grand Blue waxay indhahaygu qabteen sida ay u firfircoon tahay laakiin sida wax walba loo dejiyo, laakiin dib ayaan u iman doonaa. Waxaan sidoo kale ku dari doonaa qaar ka mid ah clips-ka gelinta, kaliya si aan u helo dhibcahayga.
Sheekada ugu weyn - Grand Blue ma mudan tahay daawashada?
[Qeybta 1-aad ee Buluugga Weyn, Xiliga 1]
Sheekada Grand Blue waxay ku saabsan tahay dugsi quusitaan kaas oo Lori (dabeecadeena ugu weyn) ay dhigto qaybta koowaad. Lori waxa ay ku biirtay dugsiga quusitaanka ee Peekaboo (ma garanayo sababta loogu yeedhay sidoo kale) oo isla markiiba waxay samaysatay saaxiibo cusub. Inta Lori uu joogo waxa uu la kulmaa jilayaal cusub oo aan hadhow u iman doono. Lori ma dabaalan karto oo cabsi ayay ka qabtaa badda, isagoo doonaya inuu halkaas ka baxo oo uu ku raaxaysto waxa uu isku dayaa sida ugu adag inuu ka gudbo cabsidiisa oo uu noqdo quusiye heer sare ah. Tani waxay u ekaan lahayd caajis haddii dugsigii quusitaanka ee uu joogay aanu ahayn wax intaas ka badan. Si kastaba ha ahaatee, dugsiga quusitaanka Peekaboo ma aha dhammaan sida ay u muuqato. Lori waxa ay arrintan ku ogaatay qaybta koowaad waana halka nalagu soo bandhigay jilayaasha ugu waaweyn.
Jilayaasha ugu muhiimsan - Grand Blue miyuu mudan yahay daawashada?
Marka hore waxaan leenahay Lori Kituhara waa arday go'aansaday inuu yimaado dugsiga quusitaanka ee Japan. Waxa uu leeyahay aragtiyo caadi ah oo ku saabsan haweenka, jinsiga iyo shaqada, oo uu ku raaxaysto khamriga. Fikradayda Lori waxay u muuqataa inay tahay qof fudud oo madax heersare ah, wuxuu rabaa oo keliya waxa hortiisa yaal, wuxuuna leeyahay qalbi wanaagsan.
Si kastaba ha noqotee, nacasnimadiisu waa shay sii socota ilaa taxanaha oo dhan tani waa dabeecadda qeexan ee Lori ee jacayl badan. Uma muuqato in uu ugu horeeyo in uu xiiseeyo quusitaanka waana ilaa uu Chisa tuso faa'iidooyinka uu si dhab ah u garto inuu ku raaxaysanayo.
Xiga waa Chisa Kotegawa kaasoo sidoo kale aado isla dugsiga quusitaanka ee Lori ee Japan. Jaleecada hore Chisa waxay u muuqataa inay tahay qof aamusan / xishood badan oo aan shucuurteeda si cad u muujin. Inta badan way carartaa marka ay soo wajahdo xaalado laga yaabo in qaarkood ay ku adkaato ama ay ku adkaato.
Sida Lori iyadu waa dabeecad lagu raaxaysto laakiin waxay noqon kartaa xoogaa caajis ah mararka qaarkood fikradayda. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la ogaaday in danaheeda ugu weyn aysan ahayn jinsiga ka soo horjeeda ama wax kale ee ay tahay oo kaliya quusitaanka, waxaana la muujiyay inay aad uga go'an tahay oo ay u heellan tahay quusitaanka. Waxay xitaa u muujisaa jacaylka ay u qabto inay la quusto Lori, taasina waa waxa ka dhigaya inuu ka adkaado cabsida biyaha.
Ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan waa Kouhei Immuhara yaa saaxiib la ah Lori, inkasta oo ay u muuqdaan inay ku murmaan marar badan. Marka la eego sheeko POV, Kouhei wuxuu ka caawiyaa Lori qaar badan oo ka mid ah baxsashadiisa oo mararka qaarkood waa kan bilaabaya.
Waxa kale oo uu ka shaqeeyaa sidii dib-u-soo-celinta labada, iyo in kasta oo ay ku doodaan mar kasta, waxay u muuqdaan inay isku taageeraan midba midka kale si uu u sameeyo labadooda yool ee ugu dambeeya. Kouhei waa dabeecad aad loo raaxaysto oo qosol badan, gaar ahaan marka lagu daro Lori, tani waxay ka dhigaysaa labada laba majaajillo oo weyn.
Jilayaasha hoose - Grand Blue miyuu mudan yahay in la daawado?
Dhammaan jilayaasha khuseeya ee Grand Blue
Waxaan jeclaa dabeecad kasta oo kor ku xusan, dhamaantood waxay ahaayeen kuwo aad ii xasuusan. Mid kasta oo iyaga ka mid ah waa mid gaar ah mana ka fikiri karo hal sabab oo ah inaanan iyaga jeclayn, ma caajisaan ama wax kasta. Dhammaantood si gaar ah ayay u qosol badan yihiin, waxaanan filayaa inay si wanaagsan u qornaayeen. Tusaale ahaan, waxaan aragnaa in Kouhei, had iyo jeer isku dayo inuu noqdo mid macquul ah oo ku saabsan xaaladaha haddana mararka qaarkood wuxuu ku dhamaanayaa inuu noqdo kan bilaabaya dood. Uma baahnid inaad jeceshahay sheekada Grand Blue si aad ugu raaxaysato, in kastoo, waan kuu balan qaadi karaa, qiimaheeda majaajilada ah ayaa ku filan.
Sababaha Grand Blue ayaa mudan in la daawado
Jilayaasha la jeclaan karo
Horey ayaan u sheegay laakiin waxaan aad u jeclaa dhammaan jilayaasha Grand Blue, xitaa jilayaasha yaryar sida kabtanka kooxda teniska ee Tinkerbell ama Nojima iyo Yammaoto. Dabeecad kastaa waxay ahayd mid gaar ah oo lagu xasuusan karo, maaha sida loo sawiray oo keliya, laakiin sida loo sawiray iyo sida loo qoray. Dabeecad kastaa waxay lahayd dhibaatooyin u gaar ah iyo sifooyin gaar ah kuwaas oo sii socday taxanaha ilaa iyo dhawrkii qaybood ee u dambeeyay. Jilayaashani waxay kaa caawinayaan inaan daawado Grand Blue? Su'aal iyo waxay siiyeen jile kasta sifo gaar ah oo ay u dhoofiyaan siyaabo kala duwan oo taxane ah. Qaado Kouhei Immuhara tusaale ahaan, waxa uu leeyahay timo cad cad, cod jilicsan iyo indho buluug ah laakiin waxaa jira shay kale oo isaga ku saabsan, waxa uu aad ugu mashquulsan yahay anime "Moster Magic Girl Lalako". Tani waxay ka dhigeysaa mid aan xiiso u qabin gabdhaha kale maadaama aysan "xitaa isku cabbir ahayn."
Si Qosol Leh
Waxaan arkay anime la mid ah Grand Blue habka ay u firfircoon yihiin laakiin ma jiraan wax u dhow heerarka animation ee Grand Blue ay shaqaaleysiiso. Ma aha wax qurux badan ama wax gaar ah oo lagu hadlo, laakiin waxay inta badan ku tiirsan tahay habka kaftan kastaa u dejiyo iyo xariiqda feerka ee soo socota. Khadadkaan feeraha waxay ku darayaan ma daawan doonaa Grand Blue? Dareen kasta oo aan helno si aan u aragno jilaha muujinayo waxaa lagu sawiray wejiyadan aadka loo buun buuniyay iyo kuwan la buunbuuniyay ee sii jiraya taxanaha oo dhan. Runtii ma hubo in la damacsanaa iyo in kale (si fiican u cad inay ahayd ilaa xad) laakiin kaftan kasta ayaa markaa lagu xoojiyaa jilayaasha ficillada nacasnimada ah kuwaas oo ka dhigaya muuqaal kasta mid aad u qosol badan.
Qaar ka mid ah jilida codka ugu wanaagsan ee aan waligey maqlay
Grand Blue waa mid ka mid ah sababaha qaar ka mid ah anime-ka aan waligood lagu dhejin karin, dhab ahaantii, xitaa uma maleynayo inay jir ahaan suurtagal tahay in la sameeyo dub of Grand Blue, gaar ahaan maaha Lori iyo Kouhei. Haddii aad i waydiinayso waxaan u maleynayaa in jilayaasha codka sameeyay Lori iyo Kouhei ay u qalmaan fucking Emmy Awards shaqadooda sababtoo ah qaylo kasta, oohin iyo qosol ayaa la sameeyay si kaamil ah waxay u muuqataa tanina waxay ka dhigtay daqiiqad kasta mid aad loogu riyaaqo. Dhammaan waxay ku dari doontaa su'aasha ah inaan daawado Grand Blue? oo isla marka aad daawato qaybta 1aad waxaad ogaan doontaa waxaan ka hadlayo.
Sheeko gaar ah
Aniga oo udub dhexaad u ah hawlo aan nafteyda uga qayb qaadan jiray, waxaan ka helay sheekada Grand Blue mid aad u xiiso badan oo soo jiidasho leh, iyada oo dhammaan sheekada ku saabsan sahaminta badda buluugga ah ay aad u xiiso badan tahay. Sheekada kaligaa runtii maaha wax gaar ah laakiin anigu midna ma jeclayn. Waxaan filayaa in xitaa la'aanteed dhinaca quusitaanka iyo sheeko kale oo aan gaar ahayn (tusaale dugsiga sare (guriga ardayda)) Grand Blue wali waxay ahaan lahayd mid aad u qosol badan oo lagu raaxaysto sababtoo ah inta badan sheekooyinka majaajillada ah xitaa waxba kuma laha quusitaanka. . Haddii aad aragtay muuqaallada Grand Blue waxaad ogaan doontaa waxa aan ula jeedo (Muqaal Quruxda, Muuqaalka Imtixaanka, Muuqaalka Tennis-ka iwm). Oo tan aniga ayaa ugu dambeyntii caddaynaysa sababta Grand Blue u yahay majaajillo wanaagsan, xitaa uma baahna sheeko wanaagsan si ay u noqoto mid qosol leh. Dhammaan tani waxay ku daraysaa su'aasha ah inaan daawado Grand Blue?
Habayn cajiib ah
Hadda ma rabo in aan wax badan ka bixiyo xagga qaswadayaasha qaar ka mid ah kaftanka iyo khadadka feerka laakiin haddii aad aragtay goobta pagent Beauty waxaad ogaan doontaa waxaan ka hadlayo. (Fadlan ha tagin muuqaalkaas kaliya daawo taxanaha oo dhan marka hore haddii kale way burburin doontaa.) Haddaba ma daawan karaa Grand Blue? Runtii waxay ahayd in aan filanayo wax la mid ah laakiin wali way i heshay! Weli waan daawan karaa muuqaalkaas haddana waan qosli karaa! Si kastaba ha noqotee, mar kasta oo kaftan ah ayaa lagu dhejiyaa Grand Blue waxaa lagu sameeyaa si sax ah oo aad ogtahay goorta la qosli karo, looma baahna qaar ka mid ah jidka qosolka nacasnimada ah.
Wada hadal aan run ahayn balse qosol badan
Wadahadalka Grand Blue si fiican buu u qoran yahay iyo xitaa daqiiqado aan xitaa loo malaynayn inay qosol yihiin (waxaan filayaa) waxaan isku arkaa anigoo qoslaya. Waxaan hubaa in soosaarayaashu ay heleen jilayaasha codka ugu fiican ee shaqada, gaar ahaan Kouhei iyo Lori maadaama eray kasta oo afkooda ka soo baxa uu yahay mid la xasuusan karo.
Inta badan wada-hadalku si sax ah ayay ula jaanqaadaan jilayaasha la sawiray mana ka fikiri karo wakhti kasta oo wada-hadalku aanu ku habboonayn waxa jilaha odhan lahaa, ama waxa ay jilaagu samaynayeen - tani macnaheedu maaha in aanay jirin.
Manga waa laga yaabaa in uu ka duwan yahay, si kastaba ha ahaatee, maan helin mudnaanta akhrinta si aanan u ogaan karin. Wadahadalka aan waaqiciga ahayn laakiin qosolka leh wuxuu ku darayaa su'aasha ah miyaan daawanayaa Grand blue?
Sababaha Grand Blue uma qalmo daawashada
Qaab animation caajis ah
Aad bay u adag tahay in laga fikiro sababaha Gand Blue uusan u qalmin daawashada laakiin si aan ku bilaabo waxaan dhihi lahaa qaabka animation-ku waa mid caajis ah oo hubaal ah wax gaar ah ma jiro. Tani ma saamaynaysaa taxanaha iyo waxa (taxanaha) ay isku dayayso inay qabato? Maya sinaba, xitaa runtii ma rabo inaad adiga uga fikirto tan inay tahay sabab aadan u daawan Grand Blue laakiin waxay socotaa su'aal sii kordheysa oo ah miyaan daawanayaa Grand Blue? Habka loo sawiray run ahaantii wax saamayn ah kuma laha sheekada iyo kaftanka toona, ee waa habka ay u xamaashaysan tahay oo ka dhigaysa mid aad u qosol badan, iyada oo ay weheliso jilida codka iyo habaynta.
Runtii waxay kuxirantahay waxa aad galayso marka loo eego Grand Blue sababtoo ah maahan qof walba. Tan waxaan ula jeedaa in majaajilada laga yaabo inaysan ku habboonayn qof kasta. Waxyaabaha galmadu runtii dhib maaha (ma aha in loo baahan yahay, daawadayaasha qaarkood ma jecla) sababtoo ah ma jiraan wax badan oo ka mid ah. Grand Blue waxay ku dhacdaa nooc gaar ah oo majaajillo ah, la siiyay tani kama dhigayso qosol yar, sababtoo ah kaftanku waa shakhsi (inta badan). Nooca majaajilada ayaa laga yaabaa inuu ku daro su'aasha ah inaan daawado Grand Blue?
Gabagabo - Grand Blue ma mudan tahay daawashada?
[Qeybta 1-aad ee Buluugga Weyn, Xiliga 2]
Grand Blue waa inay noqotaa anime-kii ugu qosolka badnaa ee aan abid arko, haddii aadan daawanin oo aad ka fekereyso, waxaan si weyn kuugu soo jeedin lahaa inaad sameyso, sidaan hubo (haddii aad gasho majaajilada anime ama majaajilada guud ahaan) ma ka shallayn doontid. Jilayaasha waa qosol gaar ah oo la xasuusto, cod ku jilitaan waa qumman yahay (oo markaan idhaahdo qumman waxaan ula jeedaa ma qiyaasi karo qof kale oo bini'aadam ah inuu sameeyo cod ka wanaagsan labada jilaa ee codka ah ee ciyaaray Kouhei iyo Lori), wada-hadalku waa weyn yahay oo Sida kaftanka loo dejiyo loona fuliyo waa wax cajiib ah oo aad u wanaagsan.
Qiimaynta Grand Blue xilli1:
Haddii aadan weli hubin inaad rabto inaad daawato Grand Blue kaliya daawo muuqaalkan ilaa uu ka dhammaanayo ka dibna arag waxaad u malaynayso. Waxaan rajeyneynaa inaad go'aan ka gaari doonto:
Markaa ma daawan karaa Grand Blue? Runtii ma jirto sabab aad u badan oo aadan u daawan Grand Blue, haddii aad waqti haysato oo aad diyaar u tahay inaad qososho, xaqiiqdii waan tixgelin lahaa. Waxaan rajaynaynaa in blog-kani uu waxtar u lahaa in uu kugu wargaliyo sidii ay ahayd, waad ku mahadsan tahay akhrinta iyo maalin wanaagsan.
Tags: animeepisode dhacdooyinka anime animeseries grandbleuanimere maqaal grandblueanime xayeysiiska shaashad weynaansho maqaalka buluuga ah Grandbluereview isgrandblueanime mudan daawasho isgrandblue mudan daawashada dib u eegis dib u eegisblueanime waaIwatchgrandblue waaIwatchgrandblue?
Gelitaan Hore Gabar fuulo - Funimations Gem qarsoon
Gelitaanka Xiga Chisa Kotegawa - Astaanta Astaanta